Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Kutaa Sadaffaa -
Previous: MARSAA LAMMAFFAA
Berhanu Hundee, Caamsaa 2, 2019
Borana Cultural Night, April 27, 2019 in Narobbi, Kenya where many Kushitic origin came together to participate, including Oromo from different parts of Oromia, Konso, Sidama, Orma, Garbaa and Garrii. Present was VP of Kenya.
Barreeffama kutaa lammaffaa keessatti sirni Federaalisimii Itoophiyaa amma jiru kun gaaga’ama keessa akka jiru fi humnootni sirna kana jibbanis ofijaaraa fi humna isaanii cimsaa akka jiran; akkasumas humni jaarmayoota Oromoo hangam abdachiisaa akka ta’e wantootni tokko tokko gabaabinaan dhiyaatanii jiru. Barreeffama kutaa sadaffaa kana keessatti shiroota humnootni farra-QBO hojjechaa jirani fi waan mooraa Oromoo keessatti mul’achaa jiran laalchisee hubannoo kiyya dhiyeessa.
Tooftaalee humnootni farra-QBO ittifayyadamaa jirani fi gargaarsa mooraa Oromootii argatan
Mooraa Oromoo laaffisuuf akkasumas injifannoolee QBOn hanga har’aatti galmeesse dhabamsiisuuf, diinotni QBO tooftaalee fi tarsiimoolee adda addaatti fayyadamaa akka jiran waanuma ifatti mul’achaa jiruu dha. Humnootni kun karaalee gara garaatiin duula cimaa gaggeessaa jiru. Karaalee kana keessaa inni tokko miidiyaa dha. Baay’ina miidiyaalee isaan qaban qofaa osoo hin taane, akkamiti murannoo fi kutannoodhaan hojjechaa akka jiran hubachuun nama hin rakkisu. Karaa miidiyaatiin olola cimaa godhuudhaan Oromoorratti addatti immoo QBOrratti maqa-xureessa hojjechaa jiru. Tuffii uummata Oromootiif qaban bira dabranii, ifaa ifatti Oromoo arrabsaa fi abaaraa jiru. Uummattootni biroo Oromoorraa shakkii akka qabaatani fi deeggarsa argachuuf yaaliin isaan hin goone hin jiru. Kanaaf miidiyaalee isaanii akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiru. Kan nama gaddisiisu garuu Oromoo keessaa warri humnoota farra-QBO kana deeggaran jiraachuu dha.
Tooftaan biroo kan isaan ittifayyadamanii al-kallattiidhaan mooraa keenya laaffisuu barbaadan maqaa OROMARA jedhuun deemuu dha. Asirratti wanti ani cimsee dubbistoota hubachiisuu barbaadu, uummattoota Oromoo fi Amaaraa jidduu hariiroo gaariin jirachuu hin qabu jechuu akka hin taanee dha. Hariiroon uummattoota kana lamaanii murteessaa waan ta’eef deeggaramuu qaba. Uummattootni kun lamaan walkeessas ta’ee akka ollootaatti nagaana waliin jiraachuun murteessaa dha. Haa ta’u malee, tokkummaa sababa godhatanii, garuu kaayyoo dhokataa qabatanii maqaa OROMARAtiin deemuun QBO ni gaaga’a malee bu’aa waan qabu natti hin fakkaatu. Adeemsa akkanaa kana keessatti tokko kan biraa gammachiisuuf jedhee waan dhugaa fi seenaa faallessu hojjechuun waan maluuf, bu’aa argamu caalaa rakkoolee isa kana wajjin uumamantu guddachaa fi babal’achaa deemu. Tokko kan biraa gammachiisuuf yoon jedhu, kun harki caalaan gama Oromootiin mul’ata. Oromoon Amaara gammachiisuuf wanti hin yaalle hin jiru. Gama Amaaraatiin garuu wanti akkanaa hin mul’atu yoon jedhe dhara hin ta’u.
Wanta ani jechaa jiru kana akka fakkeenyaatti kaasuuf, waan dhiyoo kana Ambotti ta’e yaadachuun gahaa dha. Jara kana gammachiisuuf jecha, hubatees ta’ee osoo hijn hubatin; beekees ta’ee osoo hin beekin; ittiyaadees ta’ee akka tasaa waan Hogganaan ODP Obboo Addisuu Araggaa dubbate dhugumatti waan seenaa Oromoo faallessu fi QBO xureessuu dha. QBOn maaliif akka eegale fi deemaas akka jiru waanuma diinni fi firris hubatuu dha. Harka muraa fi harma muraan Oromoorratti hojjetame waan seenaan ragaa bahuu dha malee asoosamaa miti. Warri gochaa kana ija isaaniitiin arganillee har’a waan kana dubbachaa jiru. Haa ta’u malee, wanti akka seenaatti barreeffame hin jiru; kanaafuu wanti kun asoosama malee dhugaa miti jedhanii dubbachuun, keessumaayuu Oromoo keessaa wanti akkanaa dubbatamuun baay’ee qaanii dha. Kan diinota keenya onnachiisullee isa kana dha. Madaa ofii abbaatu beeka malee ormi namaaf hin dhukkubsatu.
Fakkeenyi ani armaan olitti kaase kun handhuura qabsoo Oromoo kan taate Ambotti dubbatamuun caalaatti nama gaddisiisa; nama aarsas. Ambo wiirtuu QBO waan taateef, shirri diinaa fi faallaan QBO achitti mul’achuu hin qaban turan. Saboota fi Sab-lammoota akkasumsa uummattoota nagaa barbaadanii fi eenyummaa Oromoo kabajan keessummeessuun Aadaa Oromoo waan ta’eef, kun deeggaramuu qaba. Haa ta’u malee, lafee fi dhiiga ilmaan Oromoorra dhaabbatanii; seenaa uummata keenyaa busheessuun; akka dhugaa hin taanetti dhiyeessuun Oromoof qaanii guddaa yoo ta’u diinota QBOtiif garuu hamilee cimaa kenna. Qotiyyoo abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa jedhamaa mitii ree? Waayee kana kaasuun koo ololaaf osoo hin taane, dhimmi keenyaa hangam akka tuffatame fi orma gammachiisuuf jecha waan ofii dagachuu ykn dhoksuu yaaluun fafa akka ta’e hubachiisuufi.
Adeemsi ODP, QBO gargaaraa jira moo faallaatu hojjetamaa jira?
Akkuman kanaan dura barreeffamoota adda addaa keessatti yaada fi laalcha koo ibsaa ture, OPDO duraanii fi ODP ammaa keessa Sabboontotni Oromoof quuqaman jiraatanillee, jaarmayaan kun akka dhaabaatti ammallee kaayyoodhuma ittiin ijaarme sana qabatee hojjechaa waan jiru fakkaata. Dhaabni kun olaanummaa Wayyaanotaa jalatti, Oromiyaa keessatti isaan bakka bu’ee hojjechaa akka ture waan hirraanfatamuu miti. Har’as taanan dhaabni kun maqaa jijjiirrate malee kaayyoo fi adeemsi isaa waan jijjiirame hin fakkaatu. Adeemsi isaanii yeroo hunda orma gammachiisuuf malee, dhugumatti uummata Oromoo bakka bu’anii, dhimma saba kanaatiif dursa kennanii, hojjechaa akka hin jirre ragaalee hedduutu jiru. Kuni immoo dhugaa jiru Obboloota keenyatti himuuf malee olola miti; waanuma lafarratti mul’achaas jiruu dha. Dhimma kana bal’inaan itti deebi’a.
← Aggaammiin karaa adda addaa saba keenya Oromoo irratti adeemaa jiru dhaabbatuu qaba! Shocking news of massacre is coming from Benishangul Gumuz →
One thought on “Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Kutaa Sadaffaa”
Zomaye May 3, 2019
Ethiopians are getting one more chance to undo their mistakes, I am sure they will not stay rigid and let this last chance pass them by .
Religious churches are considering not to hold religious services and ceremonies with any other languages except in the national language of the entire country, using only Amharic language in church settings is hoped to bring an end to the current ever growing ethnic tensions and divisions in the Ethiopian society.
RSWO | Konyaa Qeellem Wallaggaa keessa’tti, Oromoonni Saddeet, RIX’n Ajjeefaman July 22, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 21, 2019 July 22, 2019
Carnage In Sidama of Ethiopia Continues Unabated – 120 to 200 killed July 22, 2019
Supporting Dr. Abiy’s agenda is supporting G-7 and Arbenyoch Ginbar July 22, 2019
WAAFFALLI QEERROO OROMOO KANA TA’EE HAFEE??? July 22, 2019
የሕዝቦችን ጥያቄ በጠመንጃ ለማፈን መሞከር የዚህቺን እምፓየር ዕድሜ ያራዝም ይሆናል እንጂ ዘላቂ ሰላም አያመጣም July 21, 2019
The Clash of Cultures in Ethiopia July 21, 2019
The Hollow Rally of the Oromo community in Saint Paul, Minnesota July 20, 2019
Afar Zone: Gaet’ale Pond – The Earth’s saltiest natural body of water belches toxic gas July 19, 2019
Rakkoolee Nagaa fi Nageenyaa Oromiyaa keessa jiraniif FURMAATA July 19, 2019
Three dead as unrest rumbles in Ethiopia’s southern Hawassa city July 19, 2019
GAAFIILEE OROMOON HUNDUU OFIS TA’EE WAL GAAFACHUU QABAN July 19, 2019
Seife Nebelbal Radio Oromo News and Interview with Ms. Samiya Usman OLF Central Committee Member July 18, 2019
Ethiopia’s Sidama ethnic group delay formation of breakaway region July 18, 2019
ነፍጠኞች ለምንድነው የኦሮሞ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ገብተው ዘመቻ የምከፍቱብን? July 17, 2019
Qophii Sagalee Irbuu, Adooleessa 17, 2019 July 17, 2019
The feuding EPRDF sisters signaling the ultimate end of an era: The final demise of the EPRDF and the making of a Real Change in Ethiopia July 17, 2019
የነፍጠኞች በኦሮሞ ማንነት ላይ ያላቸው ጥላቻ አሁንስ ከወሰን አላለፈም?? July 16, 2019
Ethiopian Returnees Recall Harrowing Irregular Migration Ordeals July 16, 2019
Colonel Mengistu Hailemariam’s advisers second chance under Dr. Abiy is failing again July 16, 2019
የሲዳማ ሕዝብ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብቱን ተጠቅሞ የሚወስደዉን ማንኛዉንም ዉሳኔ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ያከብራል July 15, 2019
RSWO | Marii Hoogganaa WBO Konyaa Kaaba-Lixa Shaggar waliin Taasifne July 15, 2019
ONN – Atakaaroon TPLF fi ADP Waa’ee EPRDF, Waa’ee Jijjiiramaa fi Egeree Biyyattii July 14, 2019
Dorgommii Daayimand Liigii: Atileet Siifan Haasan maayilii tokkoon riikardii addunyaa cabsite July 13, 2019
የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ቁጥር ዘጠኝ July 13, 2019
“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan ABO July 13, 2019
Ethiopia’s Year of Reckoning July 12, 2019
RSWO | Hidhaa, Dararaafi Ajjeechaan RIX’n Oromoota irratti Raawwatamu Daran Hammaatee Jiraachuu July 12, 2019
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Adooleessa 11, 2019 July 12, 2019
ADP and TPLF trade war of words over the recent coup event (videos in Amharic) July 11, 2019
Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Lakkoofsa Saglaffaa July 11, 2019
WBOn shiftaa miti Qabsaawota Haqaati malee, Jedhu Poolisiin Okkora Bittinneessaa Oromiyaa July 11, 2019
ከነባር የፊንፊኔ ኦሮሞ ተወላጆች የተሰጠ ማሳሰቢያ! July 11, 2019
ከህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ አና የአዴፓ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የጭንቅ ስብሰባ July 11, 2019
Seife Nebelbal Radio – Oromo news in Amharic, July 11, 2019 July 11, 2019